रेडियो उदयपुर, मंसिर २५
उदयपुरको क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका उम्मेदवार डा. नारायण खड्का विजयी भएका छन् । खड्काले प्रतिद्धन्दि नेकपा एमालेका उम्मेदवार मन्जु कुमारी चौधरीलाई ५ सय ८४ मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन् । विहान ९ बजे अन्तिम मत परिणम सार्वजनिक गर्दा खड्काले ३३ हजार १ सय ४२ मत प्राप्त गरि विजयी भएका हुन भने चौधरीले ३२ हजार ५९४ मत प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरुको मतगणना सम्पन्न भएसंगै उदयपुरबाट एक महिला सहित छ जना उम्मेदवारले विजय हाँसिल गरेका छन् । जसमा एक प्रतिनिधिसभा सहित चारसिट बाम गठबन्धनले जित हासील गरेको छ भने दुईसिट कांग्रेसले जित हासील गरेको छ । आज विहान ९बजेसम्मको मतगणनाबाट अन्तिम मत–परिणाम आएको हो । प्रतिनिधिसभा १बाट काँगे्रसका उम्मेदवार डा. नारायण खड्का, २बाट बाम गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेशकुमार राई (हिमाल), प्रदेशसभा अन्र्तगत बाम–गठबन्धनको समर्थन पाएको स्वतन्त्र उम्मेदवार नारायणब बुर्जा मगर, एमालेकी कला घले, प्रदेशसभा १ (क) मा एमालेका विमल कार्की र कांग्रेसका हिमाल कार्की लगाएत ६जनाले विजय हासील गरेका छन् । समानुपातीक तर्फको मत गणना भोलीदेखि सुरु हुने निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ ।